Ibhalwe yiziwula ukuthi ifundwe ngamampunge ... Martech Zone
Lwesine, Disemba 21, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
UMnu. Rago, umsizi womhleli wezici zomhleli eThe Wall Street Journal, ngobuciko amakheli i-blogosphere njenge:
I-Blog Mob: Ibhalwe yiziwula ukuthi ifundwe ngamampunge.
Lokhu kungaba ukuhlaselwa okunobuhle nokwedlula konke engikubonile ngungcweti wePhephandaba okwamanje! Njengompetha wakudala wephephandaba, kuyadumaza ngempela ukubona lesi simo sengqondo. Okubi nakakhulu, ngingumlandeli weWall Street Journal. Esikhundleni sokwamukela “imigwaqo emikhulu yolwazi” amaphephandaba acabanga ukuthi kufanele igcinwe ibe “umgwaqo okhokhelwayo wolwazi”… kanye nomgwaqo “oya ngakunye” lapho.
Mnu. Rago, ngiyaxolisa ukuthi wehlulwa ukulawula ukuqonda, ukusefa, nokuhlela imininingwane ngaphambi kokuthi 'sivunyelwe' ukuyigaya. Ngiyaxolisa ukuthi ngintula ulwazi lwamagama nolimi lohlelo lomuntu othile osezingeni lakho. Mhlawumbe umbono wakho uhlobene nombono wabo bonke abanye yakho umkhiqizo:
Noma lokhu… Technorati ngokuqhathanisa:
Mnu. Rago, ungahle uthande ukusibheka lesi siwula… uheha imileciles embalwa (ekhoneni ngezansi kwesokudla):
Ngilangazelela ukuqhathanisa ukufundwa kwethu ngonyaka ozayo… uma ukhona. Ngiyangabaza uzoba njalo.
RSS = Qalisa kabusha ukuthengiswa okulula? Shicilela i-Resume yakho eku-inthanethi
Dec 27, 2006 ku-3: 23 AM
Kuhlala kukhona ezinye izinyanga lapho ezicabanga ukuthi wazi konke. Ngokusobala, akanawo umqondo wokubhala izinto ezihloniphekile kwasekuqaleni… hheyi nanku umcabango… mhlawumbe ukhathazekile ngokuthi kuzofika i-blogger (Doug) engcono futhi izothatha umsebenzi wakhe kuye? 8)